Ukuzinikela kwethu kwi-NCS Sheffield - Element Society
Ukuzinikela kwethu kwi-NCS Sheffield
ISIKHOMO SETHU LWE-NCS SHEFFIELD
Injongo yethu ukuqhuba inkqubo edibeneyo yentlalo ekhuselekileyo kwaye ifikeleleke kubo bonke abatsha.
Senza konke okusemandleni ethu ukufumana abantu abancinci abaneemfuno ezahlukeneyo kwaye oku kwenziwa kwimeko ngamacala. Apho abantu abatsha okanye abazali babonise iimfuno zonyango / inkxaso kwi sicelo sabo, siya kuqhagamshelana nabo ukuze sifumane ulwazi oluthe vetshe kwaye sisebenze nawo onke amaqela abandakanyekayo kwisisombululo esona sihle.
Sizimisele ukuqinisekisa ukhuseleko lwabathathi-nxaxheba, abasebenzi, amavolontiya kunye namaqabane phakathi kwenkqubo. Sisebenza kunye namaqabane asebenze kakuhle, sisebenzise abasebenzi abaqeqeshwe ngokupheleleyo kwaye sithobele yonke imithetho efanelekileyo. Sifuna ukuba abathathi-nxaxheba balandele ikhowudi yokuziphatha elula.
Inkqubo yethu ye-NCS inikezelwa ngenkxaso yeqela lemibutho ehlangeneyo kunye namava amaninzi okusebenza nabaselula. Sisebenza kunye nenkxaso yamabhunga asekuhlaleni kunye nezikolo.
Ngethuba lemisebenzi yonke, abantu abatsha bahamba kunye nabaqeqeshi abaqeqeshiweyo okanye abaqeqeshi, kunye nabasebenzi abancinci kumlinganiselo omncinci womntu uya kuba yi-1: 7. Yonke imisebenzi yangaphandle kwindawo yokusebenza ihokelwa ngabafundisi abaqeqeshiweyo ngokupheleleyo. Iqela ngalinye liholwa ngumcebisi oqhubekayo kwininzi yesicwangciso. Bonke abasebenzi bachongiwe ngokufanelekileyo, bavotelwe kwaye baqeqeshwa kuzo zonke izinto abazithumelayo. Wonke umntu oqeshwe yi-Element kufuneka ukuba ahlolwe i-DBS (eyaziwayo ngaphambili njenge-CRB).
Ukuthobela yonke imithetho efanelekileyo
Sithobela ngokupheleleyo yonke imithetho efanelekileyo kwaye, xa kufanelekile, amaqabane ethu okusebenza ngaphandle angenalayisenisi phantsi kweMimiselo yeeLayisenisi yokuThuthukiswa kweeNkqubo ze-2004. Thina (okanye amaqabane ethu) sivelisa uvavanyo olusisiseko somngcipheko kuyo yonke imisebenzi. Bonke abasebenzi baqeqeshelwa ukuchonga, ukuqonda nokunciphisa nayiphi na ingozi ekhoyo ngexesha leprogram.
I-NCS imayelana nenselele kwaye ixhomekeke. Silindele ukuzinikela, ukuzinikezela kunye nomdla. Abathathi-nxaxheba banembopheleleko yokulandela ikhowudi yethu yokuziphatha ngexesha leprogram. Ukuba umntu othabatha inxaxheba ngokugqithiseleyo okanye ngokuqhubekayo ephule le khowudi yokuziphatha, ngoko kufuneka sibacele ukuba bashiye inkqubo. Kule meko, umntu omncinci uya kufuneka abuyele ekhaya.
I-Code of Conduct Code of Conduct
1. Landela imigaqo yokhuseleko kunye nomthetho
2. Shiya kuphela isayithi ngeMentor
3. Ukungena kwamanye amagumbi okanye amaflethi
4. Yiba kwigumbi lakho emva kwe10.45pm
5. Akukho utswala, iziyobisi ezingekho mthethweni okanye iipenknives
6. Hlonipha kwaye udibanise nabanye abantu